OwnBackup: Njodzi Kudzoreredza, Sandbox Seeding, Uye Dhata Archival yeSalesforce | Martech Zone
Makore apfuura, ini ndanga ndaendesa yangu yekushambadzira michina kune inozivikanwa chaizvo uye inozivikanwa yakagamuchirwa chikuva (kwete Salesforce). Chikwata changu chakagadzira nekugadzira mishandirapamwe yekurera uye takanga tichinyatso kutanga kutyaira huru yekutungamira… kusvika njodzi yaitika. Iyo chikuva chaive chichiita chikuru kusimudzira uye netsaona yakadzima akati wandei data revatengi, kusanganisira neyedu.
Ipo kambani yaive nechibvumirano cheyero yebasa (SLA) iyo yakavimbisa nguva yekukwira, yanga isina backup uye kupora kugona padanho reakaundi. Basa redu raive raenda uye kambani yanga isina zviwanikwa kana kugona kuidzosera padanho reakaundi. Nepo magadzirirwo edu aigona kuve akaitwa zvekare, zvese zvatinotarisira uye mutengi basa yakatsvairwa. Pakanga pasina, chokwadika, hapana nzira yekuberekesa iyo yakakosha uye yakakosha data. Ini ndinofungidzira isu takarasikirwa mazana ezviuru, kana asiri mamirioni emadhora mumari. Iyo chikuva chakatiburitsa muchibvumirano chedu uye ini ndakabva ndasiya chirongwa cheumwe wavo.
Ndakadzidza chidzidzo changu. Chikamu cheangu evatengesi sisitimu maitiro izvozvi ndeyekuona kuti mapuratifomu angave ane ekisipoti kana ekuchengetedza mashandiro… kana yakasimba kwazvo API iyo ini yandinogona kutora data nguva dzose ne. Ini kuraira vatengi kuti vaite zvakafanana.
Mapuratifomu emabhizimusi anowanzo kuve nechengetedzo-sisitimu uye mapikicha akavakirwa mumapuratifomu avo ekuzvidzivirira, asi maturusi aya haawanikwe nyore kune vatengi vavo. CRM mapuratifomu varidzi vanofungidzira zvisizvo kuti nekuti yavo SaaS dhata iri mugore, inodzivirirwa.
69% emakambani mukati meiyo Salesforce ecosystem vanobvuma kuti havana kugadzirira kurasikirwa kwedata kana huori.
Makambani akaita seSalesforce ari kutenderera, kuvandudza, uye kusanganisa padanho rekumhanyisa nemazana evanogadzira izvo zvisingaite kugadzira nekuchengetedza yakafanana codebase yevatengi kuchengetedza uye kuchengetedza yavo data. Ivo vanotarisa pane kugadzikana kwesystem, kumusoro-nguva, chengetedzo, uye hunyanzvi… saka mabhizinesi anofanira kutarisa kune echitatu-bato mhinduro yezvinhu zvakaita sekuchengetedza.
Izvo zvakakosha kujekesa kuti Salesforce haisi iyo honzeri yekutanga yekurasikirwa kwedata. Muchokwadi, ini pachangu handina kuvaona netsaona vachiparadza vatengi data. Kubuda kwedata kwakaitika nguva nenguva, asi ini handina kuona njodzi (gogodza huni). Zvakare, Salesforce ine zvimwe zvekutengesa kunze kwehuwandu hwedhata iyo inogona kushandiswa, asi izvo hazvina kunaka sezvo zvingangoda kuvaka backup, kuronga, kurondedzera, uye humwe hunyanzvi hwakakomberedza kuti ive izere solution yekugadzirisa njodzi.
Ndezvipi zvinotyisidzira zvakanyanya kune data rebhizinesi?
Rhlengware kurwisa - YeMission-yakatsoropodza uye yakajeka dhata ndiyo tarisiro yekurwira kwewareware.
Kubviswa netsaona - Kunyora kana kudzima data kunowanzoitika netsaona nevashandisi.
Kuedzwa Kwakashata - kufambiswa kwemabasa uye kunyorera zvinowedzera mukana wekusaziva kusarongeka kwedata kana huori.
Hacktivists - vezvematongerwo enyika kana vezvematongerwo enyika vanokurudzira cybercriminals kufumura kana kuparadza data.
Vakaipa Vanopinda - vazvino kana vekare vashandi, makondirakiti, kana vanobatana mubhizinesi vane mvumo yekuwana mukana vanogona kukanganisa mhirizhonga kana hukama hukadzikira.
Rogue Kunyorera - nekuchinjana kwakasimba kwevechitatu-bato kunyorera, panogara paine mukana wekuti chikuva chinogona kudzima netsaona, kunyora, kana kukanganisa data rako rakakosha.
Ndinofara, Salesforce's API-kutanga nzira yekuvandudza inowanzo chengetedza yega yega chinhu kana dhata chinhu chinowanikwa zvizere kuburikidza nehukuru hwayo hwe mapurogiramu ehurongwa hwekushandisa (APIs). Izvo zvinovhura musuwo wechitatu mapato kuti atore mukana mukudzoserwa kwenjodzi… izvo OwnBackup apedza.
OwnBackup inopa mhinduro dzinotevera:
Salesforce Backup uye Kudzoreredza - Dzivirira data uye metadata ine yakazara, otomatiki backups uye nekukurumidza, kusagadzikana-kusagadzikana kupora.
Salesforce Sandbox Seeding -Paradzira dhata kumabhokisi ejecha kuti akurumidze kuita hunyanzvi uye akakodzera ekudzidzira nharaunda pamwe Enhanced Sandbox Seeding.
Salesforce Dhata Archiving - Chengetedza dhata nemaitiro ekuchengetedza ekugadzirisa uye akareruka kutevedzera neOnBackup Archiver.
Zvino izvo Cargill iri kushandisa OwnBackup hatimbofaniri kunetseka nezve kurasikirwa kwedata zvakare. Kana isu tine nyaya, tinogona kukurumidza kuenzanisa uye kudzorera iyo data zvese kunze kwekubvisa chero dhata nguva yekupedzisira.
Kim Gandhi, Mutengi Chiitiko Strategic Chigadzirwa Muridzi kuCargill FIBI Chikamu
OwnBackup inodzivirira iwe kubva pakurasikirwa nebasa-rakakosha reSalesforce CRM dhata uye metadata ine otomatiki backups uye nekukurumidza, kusagadzikana kusagadzikana ... nemitengo iri nyore padanho revashandisi.
Ronga iyo OwnBackup Demo
Tags: chirevohacktivistsinsider insiderownbackupkuyedzwa kwakashataransomwaremafichasalesforcevatengesi vanochinjanasalesforce backupssalesforce dhata yekuchengetedzasalesforce njodzi kuporasalesforce sandbox seeding